कथा-घर : अनिश्चित यात्रा - मातृका पोखरेल
“मेरी फुपूको घर पनि उदयपुरगढी हो ।” कुरा गरिरहेका केटारूले सुन्ने गरी भनी माइलीले । ती केटाहरूले एकपटक माइलीतिर हेरे तर केही प्रतिक्रिया दिएनन् । माइलीले फुपूलाई सानै छँदा एकदुई पटक देखेकी हो तर फुपूका बारेमा उसलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । फुपू अझै पनि त्यहीँ उदयपुरगढीमै छन् । बेतिनीमा चियापसल थापेपछि उसले सुनेकी हो– “उनको कान्छो छोरो पनि माओवादी बनेर हिँड्यो रे !”
माइलीलाई सानैमा थुप्रै पटक आफ्ना बाबुआमासँग मैनी मेला गएको याद आयो । कति रमाइलो हुन्थ्यो । त्यसबेलाको मैनी मेला । अझै अर्को कुरा उसले याद गरी– ‘त्यही लोग्ने भनाउँदो धोकेबाजले एक दिन घुम्न जाउँ भनेर मैनीबजार पु¥याएको र आफूलाई मनपर्ने लुगा कपडाहरू किनिदिएको ।’ माइली ती दिनहरू सम्झदै गई– ‘मैनीबजार घुमाएर उसले एकरात कटारी बजारको लजमा राख्यो । त्यसपछि त समाजले थाहा पाइहाल्यो उनीहरूको गोप्य प्रेम । त्यसपछि गाउँका मानिसहरूले कुरा काटेर बसिसक्नु भएन ।’
‘यो नाम त मलाई पनि राम्रो लाग्यो ।’ अथकले माइलीसँग स्वीकृति माग्यो । ‘मलाई पनि राम्रो लाग्यो ।’ माइलीले स्वीकृति दिई ।
‘‘मलाई सबैले माइली भन्थे तर पार्टीमा हिँडेपछि आजदेखि मेरो नाम पनि चेतना भएको छ ।’’ उसले पनि आफ्नो परिचय दिएकी थिई । ‘‘दिदीका बारेमा हामी सबैलाई थाहा छँदै छ नि ।’’ दुबै किशोरले सँगसँगै भने । ‘‘भाइहरूले अघि भन्नुभएको कुरा मैले सुनेँ । मेरो मनको कुरा तपार्इंहरूले बोलिदिएझैँ लाग्यो । मलाई हिजैदेखि कमरेड समरको व्यवहारले कताकता चिमोटिराखेको छ ।’’ माइलो उनीहरूसँग खुल्न खोजिरहेकी थिई । ‘‘कमरेड समरको आदेश’’ भन्दै घरको माथिल्लो तलामा जान सबैलाई सूचना आयो । ‘‘दिदी यो बारेमा हामीले सोच्नै पर्छ । नत्र जनताको हामीले माया र सद्भाव पाउन सक्दैनौँ ।’’ हिमालको सही थप्यो । उनीहरू फेरि छलफल गर्ने वाचा गर्दै घरको माथिल्लो तलातिर लागे । माथिल्लो तलामा बाँसका भाटाहरूले बारेर बनाइएका चारवटा कोठा थिए । कोठाको आकृतिजस्ता मात्र भएका कोठाहरू । कुनै पनि कोठामा ढोका थिएनन् । माथितिर फर्किएर हेर्दा ह्वाङ्गै छानो देखिन्थ्यो । उनीहरू त्यहाँ पुग्दा सबै कोठामा परिवारका सदस्यहरू धमाधम उठेर आफ्ना लुगा मिलाउँदै थिए । घरधनीका छोरी, बुहारी, नाति, नातिनी सबैजनाले हतारहतारमा कोठा छाडेरबाहिर निस्किए । ‘‘उहाँहरूलाई उठाएर दुःख दिनुभन्दा हामीलाई अन्त कतै व्यवस्था गरे हुँदैन ?’’ चेतानाले कमरेड समरको ध्यानाकर्षण गराई । ‘‘कमरेड चेतना ! तपाईं अहिले पद्धति र अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोलिरहनु भएको छ । यो तपार्इंको सरोकारको विषय होइन । तपार्इंले पार्टीले दिएको निर्देशन मात्र मान्ने हो ।’’ कमरेड समर अत्यन्तै आक्रामक स्वरमा प्रस्तुत भए । ठाइँली र अप्सराले चेतनालाई चुप लाग्न सङ्केत गरे । आमाले गाली खाएको सङ्केत बुझेर शाक्ति आमाको हात समाउन आइपुग्यो । सबैजना कमरेड समरको निर्देशन बमोजिम काठाकोठाभित्र पसे । ‘‘खै ! मलाई दही थोरै भयो ।’’ टोलीभित्रको एउटा खाइलाग्दो युवकले खाना थप्दै गर्दा भन्यो ।
‘‘आज तपाईंहरू आउने कुरा थाहा भएन । ठेकीमा थोरै मात्र जमाएका थियौँ । बरु दूधसँग खानुस् न बाबु !’’ घरधनी भाउजुले सुस्तरी भनिन् । ‘‘गाउँमा गएर भए पनि खोजेर ल्याउन सक्नुहुन्न !’’ कमरेड समरले फरि जङ्गी स्वभाव देखायो । घरवाली भाउजुले लोग्नेलाई एउटा भाँडो दिएर पल्ला घरतिर जाने सङ्केत गरिन् । चेतानालाई आज राति दुई बजेसम्मै निद्रा आएन । दुई बजेपछि उसले एकछिन मात्र के आँखा चिम्लेकी थिइँन् फेरि निद्रा खुलिहाल्यो । त्यसपछि जति कोसिस गर्दा पनि उसलाई निद्रा आएन । उसलाई कुन गाउँमा आइपुगियो भन्ने बुझ्न मन लागिरहेको थियो, घरधनी मानिसहरू उठेको सङ्केत पाएपछि ऊ सुस्तरी तल आँगनम झरी । धर्तीमा मिरमिरे उज्यालोको सङ्केत मात्रै परेको थियो । घरधनी दाइ गाइवस्तुलाई खोले घाँसको व्यास्था गर्दै थिए । उसले घरभित्रको मधुरो उज्यालामा जस्केलोबाट चियाएर हेरी, घरपरिवारका सबै सदस्यहरू भुइँतल्लाको चुल्हो र अगेनो वरिपरि गुन्द्री ओच्छ्याएर बग्रेल्ती सुतिरसहेका थिए । ‘‘यस्तो मुटु छुने जाडोमा यसरी गुन्द्री ओच्छ्याएर मानिसहरू कसरी रात काटे होलान् ।’’ उसले मनमनै आफैँलाई सोधी । ‘‘दाइ ! यो गाउँको नाम के हो ? ‘घरधनी दाइलाई सोधी ।
‘‘पिपलभञ्ज्याङ् !’’ ऊतिर नहेरी घरधनी दाइले उत्तर फर्काए । चेतानाले पश्चिमतिर फर्किएर हेरी । तल नागबेली भएर । बगिरहेको सुनकोसीलाई देखेपछि उसले आफ्नो माइती गाउँ मयङ्खु त्यहीँ माथि हुनुपर्छ भन्ने लख काटी । Posted by